DAAWO Cadaadis iyo Caga Juglayn badan kadib Muuse Biixi oo qirtay inuu qaldamay diyaarna uu u yahay wada hadalada Somalia “Xog ay heshay Shabakada Allbanaadir News” | Allbanaadir Media
DAAWO Cadaadis iyo Caga Juglayn badan kadib Muuse Biixi oo qirtay inuu qaldamay diyaarna uu u yahay wada hadalada Somalia “Xog ay heshay Shabakada Allbanaadir News”
Madaxwaynaha Maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo dhawaan socdaal kumaray qaar kamid ah Deegaanada maamulkaasi ayaa mudadii socdaalkiisa uu ku guda jiray waxa uu shacab soo dhaweeynayay usheegay in Maamulkiisa gebi ahaanba uu joojiyay wadahadalkii kala dhaxeeyay Dowladda Dhexe.
Muuse Biixi oo hadalkaas shacabka isaga iibinayay ayaa la kulmay cadaadis xoogan oo kaga yimid Xisbiyada Mucaaradka iyo qaar kamid ah Shacabka Gobollada Maamulkaasi.
Xog Hoose oo ay heshay Shabakadda Caalamiga ah ee Allbanaadir News ayaa sheegaysa in Muuse Biixi uu cadaadis iyo cagajuglayn ku saabsan in la curyaaminayo uu kala kulmay Beesha Caalamka taas oo ugu dambeyn sababtay inuu Qirto inuu ku qaldamay hadalkiisii hore isla markaana uu diyaar uyahay in wadahalada uu kula Dowladda Dhexe sii wado.
Riix Halkaan si aad Muuqaalka udaawato
Xisbiyada Mucaaradka ee WADANI iyo UCID ayaa la rumaysan yahay in Beesha caalamka ay ugudbiyeen dacwad ka dhan MD Biixi taas oo ay ku sheegay in uu qaatay Go’aan kalinimo ah isla markaana wadahadalkii mudada badan soo socday uu joojiyay.
Shalay waxaa Hargaysa tagay Wafdi uu hogaaminayo Wakiilka Midawga yurub uqaabilsan Dalka Somalia waxa uuna la kulmay Muuse Biixi, iyadoona kulanka kadib warsaxaafadeed kasoo baxay Madaxtooyada Maamulkaasi lagu sheegay in Somaliland ay diyaar utahay in sii wado Wadahadalkii ay kula Jirtay Dowladda Somalia.